DEG-DEG: SAWIRRO: Ciidamada ilaalada Madaxweyne Farmaajo oo jirdil xoogan ugeystay gabadh saxafiyad ah iyo ururka Nusoj oo soo saaray war culus. – Puntland News.net
Home 2018 January 14 Somali News DEG-DEG: SAWIRRO: Ciidamada ilaalada Madaxweyne Farmaajo oo jirdil xoogan ugeystay gabadh saxafiyad ah iyo ururka Nusoj oo soo saaray war culus.
DEG-DEG: SAWIRRO: Ciidamada ilaalada Madaxweyne Farmaajo oo jirdil xoogan ugeystay gabadh saxafiyad ah iyo ururka Nusoj oo soo saaray war culus.
Ururka Nusoj wuxuu si adag u cambaaraynayaa, xadgudubyadii loo gaystay shalay, wariyaashii ku howlanaa tabinta wararka soo dhoweynta madaxweynaha dalka, ee magaalada Gaalkacyo, ciidamada amniga waxay dhibaateeyeen wariyaal isugu jiray wiilal iyo gabdho.
Laakiin wariye Bahja Cabdulaahi oo ka tirsan Radio Codka Nabada, waxaa soo gaaray dhaawacyo muuqda, oo ku sawiran wajigeeda, ka dib markii ay ciidamadu u bareereen inay qori baadkiisa ku garaacan wariyaashii ku jiray howl maalmeedkooda wareed, taasna waxay halis iyo gef weyn ku tahay xuquuqaha insaaniga ah iyo kuwa saxaafadeed ee u baahan ixtiraamka.
Bahja oo aan la xidhiidhay, waxay sheegtay inay dareemayso xanuunka dhaawacyadii soo gaaray, waxayna ii xaqiijisay in ciidamadu ay awood u isticmaaleen wariyaasha, xilli ay ayagu (wariyaasha) dalbanayeen in lagu ixtiraamo gudashada howlahooda baahineed, arintaan ayaa ku soo beegmaysa ayadoo uu maalinkii seddexaad ku jira Saldhiga koonfureed ee Galkacyo wariye Hanad Cabdi Faarax, oo wali lagu howlanyahay dadaalada lagu raadinayo xorriyaddiisa.
Wariyuhu wuxuu xaq u leeyahay in lagu ixtiraamo howlihiisa si madaxbanaan, sidoo kalena uu helo caddaalad si loola xisaabtamo kuwo ku xad gudbaya badqabkiisa iyo xorriyaddiisa.